A Guide Full on Sida loo isticmaalo Google Haddaba kasta oo ay taageerayaan Android Devic
A Guide Full on Sida loo isticmaalo Google Haddaba kasta Device Android ay taageerayaan
Weligaa ma u malaynaysaa ee taariikhda kaaliyaha ugu weyn ee shakhsiga ah? Aad Malaha ma samayn, laakiin hubi in aad isticmaalkiisa Waxaan ahay. Waxa aan dhisay maalin. Waxaa maalin waxaa sameeyay maalin. Google Hadda waa caawiyaha caqli shakhsi ahaaneed oo horumarsan by kii Android Google. Waxa ay ku bilaabatay safarka on July 9, 2012 iyo hadda waxa uu noqday kaaliyaha shakhsi caqli badan ugu fiican. On 2011 Google bilaabay si kor loogu qaado codka raadinta Google u version soo socda OS ee android. Waxaa markaa la odhan jiray "Majel". Waxaad ogaataan oo ku saabsan "Majel". Codkeedii loo isticmaalaa in nidaamka kombiyuutarka ee filimka Star celiso. Marka dhexe ee 2012 Google sii daayay Google Haddaba android iyo kadib marka jawaabta weyn ka user ee Android ay baahisay update hore Dhawr bilood ka dib ee isla sannadkaas. Waxaa markii hore ahayd bandhig ah oo Android Jelly bean (4.1). Haddaba waxaa laga heli karaa kala duwan ee Android version.
Google haatan waa mid wax tar leh marka aad u baahan tahay kaalmo la taaban karin. Kaliya waa inaad amartaa karaan iyo shaqo sameeyey hesho. Haa, waxaan ka hadlayaa cod amarka raadinta ama u ogaato wax. Google haatan diyaar u ah qalab kasta android in uu leeyahay android version 4.1 iyo sare. Dhab ahaantii waxaa la yimaado qalabka sida dhisay codsiga. Waa kuwee la meel fog laga heli karaa by kabacdi ka soo xagga hoose ee shaashadda guriga? Waxaan ku tusi doonaa sida si ay ula falgalaan Google hadda. Google hadda sameeyaa shaqooyin badan oo ay ka app multi-duruufaha. Asal ahaan Google hadda la dhaqan ku salaysan codsi raadinta Google. Markii hore waxaan arkay codsigan sida bar baaritaan sida widget (inta badan muujiyeen shaashada guriga) laakiin hadda waxaan codsigan sida Google hadda wax ku arkaa. Waxa aanu raadinaya shaqo si aad u ogaato wax ku saabsan qalabka iyo off qalabka. Waxay aqoonsan tahay si joogto ah ay fuliyeen user. Waxaa ka mid ah goobaha caamka ah, ballamaha taariikheed ee soo noqnoqda, weydiimo raadinta. Waxaad si fudud u qaban karaan shaqo kasta ku saabsan qalabka (ciyaaro Music, u yeedhay qof, jihada, goobaha Change, ka dhiman dhigay iyo qaar badan) cod amarka. Tani ma ahan dhamaadkii waxaa sidoo kale wax kale samayn kara. Aan soo sheegay shaqeynta loo baahan yahay in nololeed maalin kasta. Google hadda u dhaqmo sida kaaliyaha ugu fiican dalwaddii aallada mobile si fudud codkaaga amarka. Waxay ku siin karaan waxqabadka ugu fiican ilaa iyo haatan diyaar u ah codka mobile raadinaya sirdoonka macmal ah. Si aad u hesho version kama dambaysta ah ee Google haatan bal taga PlayStore raadi "Google Search" keyword si ay u soo bixi. Xasuuso haddii aadan ka raadin la keyword uu ku siiyo waxaa ma ka heli doonaa wax. Waxaad u baahan tahay in ay maanka ku hayo in Google raadinta Google waa hadda. Habka kale xaq ugu noqon karaa aad tagto Link ka siiyaa biraawsarkaaga iyo download it. Ka hor inta aadan kala soo bixi hubi in aad qaybiyay aad Google Play account la mail Google aad sidoo kale loo yaqaano Gmail. Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan tixraac Google website hadda rasmiga ah, maxaa yeelay, ninna garan maayo ka khayr badan kii sameeyey waxaa ka mid ah.
Google ayaa sii daayay habka fiican in aan bilowno Google hadda qalabka Android aad taas oo ah Google Hadda launcher. Waxaad ka heli kartaa halkaan. Google Nexus iyo Google ciyaaro qalabka edition isticmaali kartaa launcher in ay ku daah Google hadda meel kasta shaashadda guriga iyo sida loo sameeyo liiska app. Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 iyo wax kasta oo kale oo koob ee Google play soo bixi kartaa oo wuxuu ku raaxaysan fog ee Google hadda. Google hadda launcher muuqataa wanaagsan u Tablet kiiskan Nexus 7. Waxaad si toos ah uga screen guriga ka raadin kartaa by siyoodba icon launcher ama kaliya waxaad ku odhan "Waayahay Google" iyo raadiyo content sida aad doonayso inaad qalabka ama bogga internetka. Si aad u raadiso bogga internetka waxaad u baahan tahay in la xiran gacanta la xidhiidha ama via WiFi. Tani waxay u muuqataa mid fudud sida in kaliya la yidhaahdo "Waayahay Google" in ay kiciyaan oo ay aqbasho cod. Markaasaan ku odhan aad su'aal raadinta waxa aad raadinayso ama aad telefoon u sheeg waxa aad rabto iyada si ay u qabtaan tusaale ahaan diro farriin qoraal ah, aad u hesho tilmaamaha, ama ciyaaro ah song (la heli karo ee US, UK, iyo Canada) iyo wixii la mid ah. Just ciyaaro la leeyihiin oo xiiso leh.
Google haatan diyaar u ah version hawlgalka oo dhan dhawaan sii daysay Android. Waxaa ay ku bilaabataa ka 4.1 in version sare. In eray, qalab kasta oo la 4.x waxaa lagu taageeray u Google hadda. Waxaa ka mid ah nooc kasta ee casriga ah. Waxba ma ahan wixii casriga ah aad qabto. Si aad u isticmaasho Google hadda aad u baahan tahay waxaad hubisaa in aad version updated Android oo waa 4.1.Once ugu yaraan aad u leedahay in aad ku biiri bulshada weyn ee Google hadda user.
Wixii inta kale ee qalabka u aan la heli karin si ay u soo bixi Google hadda launcher laakiin Waxaa suurto gal ah in ay soo bixi Google hadda. Muuqdaa cajiib ah? Haa, waxaad kaloo samayn kartaa wax walba ku xusan version, laakiin waxa kaliya ee ma noqon doono in aad awoodid in la sameeyo waa ay leeyihiin launcher ee aad screen guriga. Kale this badan wax samayn kartid. Marka waxaan ku leeyahay wax aan ula jeedo wax. Si aad u bilaabin isticmaalka Google hadda fadlan raac edbinta hoos ku qoran.
(A) soo celi qalabka Android iyo dib u screen madaxa.
(B) dadban ka soo hooseysa. Waxaad arki doontaa wax goobo ah la Timaadda "Google" sare ee wareegga. Waxaa sii joogo ka yar labaad ah.
(C) Haddaba waad arki sanduuqa raadinta sare ee bogga. Halkan ku qor si ay u baadhaan. Waxa ugu xiisaha badan waa aadan u baahan in la qeexo in aad rabto in aad ka raadin ah oo ku saabsan qalabka, ama bogga internetka. Marka aad ku qori wax ku sanduuqa raadinta, waxaa si toos ah u ogaadaa meesha laga raadin. Tusaale ahaan haddii aad rabto in aad raadiso tirada xiriir ah oo ku saabsan qalab aad aad kaliya ku qor kartaa magaca qofka. Waxaa idin ​​tusin doonaa liiska xiriir halka aad ka heli kartaa la doonayo info qof xiriir. Dhinaca kale, haddii aad ka raadin "Facebook" waxaad arki doontaa waxa kuu kaxeeyo xagga webView ah.
(D) Si aad u isticmaasho cod amarka aad u baahan tahay inay hesho on icon MIC ee geeska midig ee sare. Marka aad ka jaftaa icon, ay bilowdo inay qabtaan falalka sida ay codkaaga.
(E) Waxaad astaysto Google hadda dul dhejisaa sida aad jeceshahay. Calan luqada aad door bidayso. Dhammaan luqadaha waxaa laga heli karaa halkan. Si aad u bedesho Language aad u baahan tahay si ay u tagaan goobaha.
raadiyaan doorasho on Google hadda. Markaas, Settings tuubada> Voice> Language.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa headset u cod amarka kaas oo laga heli karaa bogga isku mid ah.
(F) Change account & gaarka ah: Demi xisaabtaada Google in account kale Gmail.
(G) ku qabsada aad search engine in engine deegaanka search: By default waxaa la dhigay www. google.com. Si aad u bedesho: Xulashada> Settings> Accounts & gaarka ah> Hubi "raadi google.com"
Waxaa jira qaababka badan oo dheeraad ah oo Customization aad qaban karto. Sidaas aad ogeysiin nooca ugu dambeeya ee Google hadda oo ay xiiso u leh. Nasiib wacan!
Sida loo iibso Music on Android ee Android Apps?
Kies aan shaqayn ama xiridda, Waa kuwan Solutions ah
Top 5 Manager Android Bluetooth: Wax walba oo ku saabsan Bluetooth on Device Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in Moto X
Sida loo saar Music on HTC Mid ka mid ah X
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay si HTC
> Resource > Android > Sida loo isticmaalo Google Haddaba Device Android